To raise women rights and gender awareness: သတ္တိရှင်လေး မဝေနှင်းပွင့်သုန်
ရဲဘော် / မိတ်ဆွေများ ။
- (၈၈)မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး ၏ သမီးဖြစ်သူ မဝေနှင်းပွင့်သုန် က အောက်တိုဘာလ(၁၆ )ရက်နေ့မှာ ပေ(၁၆၀)အမြင့်က ခုန်ချတဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ကို ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ရဲဘော်တို့ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ၀ိုင်းဝန်းအားပေးဖို့ သတင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ အောက်ပါလိပ်စာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
- ကျနော်မလုပ်နိုင်တာကို လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ကျနော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ဒီသတင်းကို ဖြန့်ဝေလိုက်တာပါ ။
မေးလ်မှ လက်ခံရရှိမှုကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်... သတ္တိရှင် ဝေနှင်းပွင့်သုန် ကို ဝိုင်းကူရအောင်ပါ...။
Posted by mabaydar88 အချိန် ; 7:09 AM
အစ်မတို့တွေက ဒီမိုဝါဒတစ်ခုပဲ ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။ ဒီမိုဝါဒအတွက်ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားတွေပဲ။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို တစက်မှ မကြည့်ဘူး။ မဖြောင့်မတ်တဲ့ အစ်မတို့လို မျက်ကန်းဝါဒီတွေ ဒီမိုအစိုးရ လူသတ်တာကို မဆွေးနွေးရဲတာ သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေကို နိုင်ငံရေး ဇတ်ခုံပေါ်မှာနေရာပေးရင် တိုင်းပြည် အနာဂတ်ကို အမှောင်ထဲ တွန်းပို့တာနဲ့ အတူတူပဲဆိုတာ မသိပဲ စွတ်လုပ်နေပြန်ပြီ။ အစ်မတို့ ဒီမိုတွေ စည်းဘောင်မရှိလုပ်နေလို့ကတော့ နအဖကို ဖြုတ်မပြောနဲ့ အသားလေးတောင် ထိနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
၀ါဒမျက်ကန်းဖြစ်နေသူများကို နည်းနည်းမှ ကြည့်လို့မရသည့်
Yes, it is right what Zaw Myo said. Most of myanmar people can not consider properly. They just want to against Military Gov. They dont know abt how dangerous KALAR(MuSaLane) is. Kalar are much more dangerous than Military GOv.
Pls think properly!
much more dangerous than Military GOv.
Blogger mabaydar88 said...
အသိတရား နည်းသူများအတွက် ..
လူတယောက်အား သိက္ခာကျအောင် စော်ကားရေးသားခြင်းသည် အင်မတန်မှ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သဖြင့် မန့်များကို ဖျက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်..။
လူတို့သည် မိမိယုံကြည်ရာကို လုပ်ဆောင်ခွင့် ရေးသားခွင့်ရှိသော်လည်း လူတယောက်အပေါ် အမြင် မတူသည့် အပေါ် .. စော်ကား.. ရိုင်းစိုင်းစွာ ရမ်းကားရေးသားမှုအား မဗေဒါ အားမပေးသည့်အတွက် မန့်များကို ဖျက်ပါသည်..။
စော်ကားရမှ ရိုင်းစိုင်းရမှ နေသာလျှင် မိမိနှင့် အဆင့်တူသူများ နှင့်သာ ဆွေးနွေးစေချင်ပါသည်...။ မဗေဒါ ဘလော့ကို မလာစေချင်ပါ...။
အမြင်မတူသူများ၏ အတွေးများကို အစဉ် လက်ကမ်း နားဆင်လိုပါသည်.. ။ သို့သော် ... အဓိပါယ်မဲ့စွာ လူတယောက်အား သိက္ခာ ချချင်သည့် လူ့အသိတရား နည်းလွန်း သည့် ရိုင်းစိုင်းသော ရေးသားခြင်းမျိုး လက်မခံဆိုသည်ကို လူ့အရိုင်းအစိုင်းများ သိအောင် ထပ်မံ အသိပေးပါသည်..။
ဗေရေ ဇေမြင်တာကိုပြော ကြည့်မယ်နော် ဇေ့အမြင်ဗျာ
လူတစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းတပါးမှာ ဒီမို အတွက်ပါဆိုပြီး တိုက်ပေါ်က ခုန်ချသေတာထက် ၊ ဆန်ဈေး လေးချပေးပါဆိုပြီး စာတမ်းလေးကိုင်ပြီး မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းမှာ လာအဖမ်းခံတာက ပိုပြီး ဒီမိုစစ်မယ်လို့ မြင်မှိတာပါဘဲ ၊ ဗေရေ ဘာသာခြား တချို့ဟာ ဘာသာ ရေးနဲ့ လူမှု့ရေးကို ရှုတ်ထွေးအောင် တွေးမြင်ယူဆကြတယ် အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များဟာ အဲလိုအတွေးပို ထက်သန်ကြပါတယ် ၂၀၀၂နှစ်စက်တင်ဘာ အကြမ်းဖက်မှုကြီးကို ကြည့်လိုက်ပါ ဝေါ့ထရိတ်စင်တာကို လေယာဥင်္နဲ့ တိုက်ချလို့်တော့ လူသေတယ် တိုက်ချသွားတဲ့ လူတွေကတော့ သေသွားတော့ မသိတော့ဘူးလေ ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာ သန်းချီပြီး ဒုက္ခရောက်တယ် အာဖဂန်ကိုကြည့်ပါ ဘယ်လောက် ဒုက္ခများသွားသလဲ ဆမ်ဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ အီရတ်ကို ကြည့်လိုက်ပါ အဲဒီ ကိစ္စတွေရဲ့ အဓိက တရားခံဟာ လေယာဥင်္ပျံပေးဆွဲပြီး ဝေါ့ထရိတ်စင်တာကို တိုက်ချသွားတဲ့ လူ၁၂ယောက်လောက်လုပ် လိုက်တာ အကျိုးဆက်တွေပါ လူသန်းချီ သေတယ် ဒုက္ခသုက္ခတွေရောက်တယ် ၊ သေသွားတဲ့ လူတွေကလဲ အော်သွားသေးတာဘဲ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတဲ့ ဘာညာတဲ့ သူတို့ပြောတဲ့ အတိုင်းဖြစ်ပါသလား ယခု အမေရိကန်မှာ နေနေရတဲ့ အစ္စလာမ်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါ ဘယ်လောက်အစော်ကား ခံနေရသလဲ ကျမ်းစာမီးတိုက်မယ် လို့ချိန်းခြောက်ခံရတယ် ဆောက်လက်စ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံတွေ ရပ်နားထားရတယ် ဒါတွေဟာ ဟို၁၂ ယောက်လုပ်လိုက်တဲ့ ဆိုးမွေတွေပါ ၊ ဒီမိန်းခလေးရဲ့ ကိစ္စကလဲ အဲလိုပါဘဲ ၊ ဆိုးမွေတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်
နောက်ပြီး ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် ဒီမိုဆိုတာ ဒီလိုလား ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီမိုရသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေနဲ့ ဒီမို တွေအားလုံးကို ထိခိုက်ပုတ်ခတ်စော်ကားနိုင်ပါတယ်
သူဒီလိုလုပ်လို့ တိုင်းပြည်ထဲက ပြ၁သနာ တစုံတရာ ပြေလည်သွားမယ်ဆိုရင် ဆယ်ခါပြန်ခုန်ချပြီး သေလိုက်ပါ သိပ်အကျိုးရှိပါတယ် ၊ ယခုလုပ်ရပ်ကို ဇေ့အမြင်နဲ့ ပြောရရင်တော့ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ကိုယ့်ကြောင့် အားလုံးနာမည်ပျက်စေမဲ့ အကျိုးမဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်သလို ခပ်ကြောင်ကြောင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးရူးသွေးတန်းလုပ်ရပ် လို့ရှုမြင်ပါတယ် ။ လူတချို့ကတော့ ဒါကို အာဇာနည်ကြီး အဖြစ်ချီးမွမ်းကောင်း ချီးမွမ်းပါလိမ့်မယ် ၊ သူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့ လူတွေဟာ သူလိုလူတွေသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊ စကားပြောခွင့်ရရင် တခွန်းလောက်မေးချင်ပါတယ် ၊ တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တာလား နာမည်တခုခုတပ်ပြီးဟီးရိုးလုပ်ချင်တာလားလို့
အာဇာနည်ဆိုတာ အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ်တွေးပြီး လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုသာ ခေါ်ဆိုရတာပါ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်ပြီ မတွေးဘဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နာ မည်ကျန် ပြီးရော ဆိုတာက အရူးတွေသာ လုပ်ပါတယ် သတ္တိဆိုတာ ထို့တူပါဘဲ ၊ သူရသတ္တိဆိုတာ အများ အကျိုးကိုသာ ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ သဘောအဓိပ္ပါယ် ဆောင်ပါတယ် ကိုယ့်အကျိုးကို ကြည့်ပြီးလုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ ငါရသတ္တ်ိသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊ ယနေ့ မြန်မာ ပြည်မှာ တကယ်လိုအပ်နေတာ ဒီမိုကရေ စီမဟုတ်ပါဘူး ခေါင်းဆောင်ကောင်းပါ ၊ စကာင်္ပူလို နိုင်င်ငံတောင် မဲမပေးဘဲ ၄၆ နှစ်နေနိုင်ရင် ၊ မြန်မာတွေ နှစ်တရာ လဲ နေလို့ရပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ဦးဏှောက် ကောင်းမဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်တော့ လိုပါတယ် ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်သလို ၊ သူရသတ္တိနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ လူတဦးတယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေလဲမဟုတ်ပါဘူး ၊ မိမိကိုကိုယ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ကြောင်တောင်တောင် ကြားတားတား အောက်တန်းစားလုပ်ရပ်တခုအဖြစ် ရှုမြင်ပါတယ် လို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဇနဲ့ သိက္ခာတန်ဘိုးထားတဲ့ အနေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချပါတယ် ၊ မြန်မာ့သွေးပါတဲ့ မြန်မာဟာ ဒီလိုလုပ်ငန်းကို အလဟဿ လုပ်ငန်းတခု အနေနဲ့သာ ရှုမြင် ပါတယ်လို့ နိဂုံးချုပ်ပါတယ် ။
“သို့သော် ... အဓိပါယ်မဲ့စွာ လူတယောက်အား သိက္ခာ ချချင်သည့် လူ့အသိတရား နည်းလွန်း သည့် ရိုင်းစိုင်းသော ရေးသားခြင်းမျိုး လက်မခံဆိုသည်ကို လူ့အရိုင်းအစိုင်းများ သိအောင် ထပ်မံ အသိပေးပါသည်..” ဟိဟိ.. လေးစားပါတယ်လေ။ ဒီမိုနဲ့နအဖတံဆိပ်ကွာပေမယ့် ကုလားကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့ နေရာမှာ တူညီတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါပဲ။ ကုလားတွေက အဲဒါကို သိလို့ . . . . . မြန်မာပြည်ထဲမှာ နအဖနဲ့ ပေါင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ အတူတူ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ကြတယ်။ အပြင်ဘက်မှာကျတော့ ဒီမိုတွေနဲ့ပေါင်းပြီး စားခွက်ချောင်အောင်လုပ်တယ်။ အစ်မရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကတော့ လက်လံပါတယ်.. ကုလားက မိမိကိုးကွယ်တဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓကို စော်ကားတာကို ဘာမှ မခံစားရဘူး။ ကုလားက ဆရာတော်ကို စော်ကားတော့လည်း အေးဆေးပဲ။ ဒါပေမယ့် ကုလားမအတွက် ဆတ်ဆတ်ထိအောင် နာတယ်ဆိုပဲ။ဒေါသကလဲ သိပ်ကိုထွက်တယ်ဆိုပဲ။ အဲလို စိတ်ဓါတ်လေးကို ကုလားတွေက သိပ်ပြီး သဘောကျတာဗျ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဗုံးခွဲ.. အဓိကရုဏ်း.. မုဒိမ်းကျင့် စတဲ့ ဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့ ကုလားတွေက မဗေဒါကို ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်တဲ့။
ကုလားကိုထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူများကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ မြန်မာကိုထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံသော
မဗေဒါလိုပဲ ကုလားတွေကို အကောင်းမြင်ပြီး ကုလားတွေ ဘက်ကနေ နာနေတဲ့ ဒီမိုနဲ့ နအဖတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကုလားကလဲ ၂ ဖက်စလုံးကို လိမ်ညာပေါင်းပြီး လုပ်စားနေပါတယ်။ကျုပ်ဟာ မဗေဒါကို အရမ်းလေးစားခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ စိတ်ထားနူးညံ့မှု … ကျနော့အပေါ်နားလည်ပေးမှု.. လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ပေးမှု . . . ဘာသာရေးကို လေးစားမှု စတဲ့စိတ်လေးတွေကို ငဲ့ညှာပြီး ဘာမှမပြောပဲ လက်ပိုက်ကြည့်ပြီး နေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ကုလားကိုထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးလောကမှာ အားပေးသလိုဖြစ်လာမယ်။ ( အခုတောင် ကုလားတွေဟာ နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ နေရာတော်တော်များများကို ယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခင်မင်မှုကို ဦးစားမပေးပဲ.. မဗေဒါကို ရှုံ့ချပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် ကုလားကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့ စိတ်ထားတွေ ပိုပြီးကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။ ကုလားတွေကလဲ ဘာသာရေးကို အရေခြုံပြီး မကောင်းတာတွေကို ပိုပြီး လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ကျုပ်တို့ တမျိုးသားလုံးအတွက် အန္တာရယ်ပါပဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခင်မင်မှုထက် ပြောသင့်တာကို ပြောဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာလူမျိုးကိုထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံသော
အင်္ဂလန် နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လူအများစိတ်ဝင်စါးလာအောင် ဒီလိုခဲရာခဲဆစ် အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီး မိမိလှူလိုသောအသင်းအဖွဲ. အတွက် အလှူငွေကောက်ခံတာဖြစ်စေ လူအများကို သိစေလိုတဲ့ ကိစ္စ ထင်ရှားလာအောင် ဖြစ်စေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ် မည်သူ.ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုမှုမရှိ တာမို. ဘုန်းကြီးတွေ ကျောင်းသားတွေကို လမ်းမတွေပေါ်မှာ ပစ်သတ်သလို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းသတင်း တခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာပြည်သူ ၉၀% က တောင့်တနေကြတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရေး၇ာကို ကမ္ဘာ့လူအများ စိတ်ဝင်စါးလာအောင် လုပ်တာဟာ အများ အကျိုးဆောင်ရွက်တာပါဘဲ.. ဒီမိုကရေစီ အရေးအွက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကထဲက တချို.က ကျောင်းတွေ လမ်းမတွေပေါ်မှာ အသက်စွန့်ပီး ဆန္ဒပြတယ် အချို.က ထောင်တွေထဲမှာ အသက်ပေး ပီးဆန္ဒပြတယ် အချို.ကတော့ ပြည်ပထွက်ပီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စါးမှု ထောက်ခံမှုရအောင် ကျိုးပမ်းကြတယ် မဝေနှင်းပွင့်သုံ ရဲ့ ဖခင်ဦးမြအေး အပါအဝင် ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်တိုက်ပွဲ ဝင်နေကြပုံ တွေကို ကမ္ဘာက သိအောင် သူကျိုးပမ်းတာဟာ အပစ် လုံးဝမရှိလို. ချီးကျူး ပါတယ်။
ကုလားတွေကို လူလိုတွေးလို့မရဘူးလေ။ ကုလားတွေက ဘာသာရေးဆိုပြီး လူတွေသတ်တယ်။ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်တိုင်း ကုလားတွေချည်းပဲ။ ကုလားကင်းတဲ့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းမရှိပါဘူးကွာ။ ဗုံးခွဲ..စစ်ဖြစ်တာလဲ ဘာသာရေးအတွက်တဲ့။
ဘာသာရေးဆိုပြီး.. ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားမြေတွေကို ခိုးပြီး ပလီဆောက်တယ်။ ဘာသာရေးဆိုပြီး ဂျူးဘုရားကျောင်းမြေတွေကို ခိုးပြီး ပလီဆောက်တယ်။ ဘာသာရေးဆိုပြီး ခရစ်ယာန်ကျောင်းမြေတွေကို ခိုးပြီး ပလီဆောက်တယ်။ ဘာသာရေးဆိုပြီး ဟိန္ဒူမြေတွေကို ခိုးပြီး ပလီဆောက်တယ်။ အဲလိုခိုးပြီး ပလီဆောက်နိုင်တာကို ကုလားတွေက ဂုဏ်ယူကြတယ်။ သူများတွေရှက်တဲ့ ကိစ္စကို ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ကောင်တွေကွ။
သူတို့ ခေါင်းဆောင်ကြည့်တော့ မုဒိမ်းကောင်.. ကြာကူလီ.. လူသတ်သမား။ မိုဟာမက်ဘယ်လောက်အထိ တဏှာရူးလဲဆိုရင် သူ့ချွေးမကိုတောင်ပြန်ပြီး ကြာကူလီခိုတာကွ။ မိုဟာမက် ဒီခေတ်မှာရှိနေရင် ကြိုးစင်တင်ခံရမယ့်ကောင်ပါ။ အဲလိုကြိုးစင်တင်ခံရမယ့်ကောင်ကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ ကုလားတွေကို လူလိုမတွေးရဘူးလေ။
အခုကိစ္စမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုလားမက လုပ်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုလားမ နိုင်ငံရေးနေရာရအောင် ကြံဖန်တာပါ။ ကုလားတွေက ဘာသာခြားအတွက် ကောင်းတာလုပ်ပေးဖို့ နေနေသာသာ အပေါင်းအသင်းလုပ်ရင်တောင် ငရဲရောက်မယ်လို့ Allah ဟောထားတာပဲ။ တကယ်လို့ နေရာရရင် မဗဒါလို ခပ်ညံ့ညံ့ ဒီမိုတွေကို နာဖားကြိုးထိုးပြီး ပလီဆောက်ခိုင်းမှာပါ။ ရှင်းတယ်နော်?
အပေါ်က ကိုဇေ ရေးထားတာ တကယ့်ကိုအမှန်တွေပါပဲ။ လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ ကိုဇေရေစိတ်တော့ပူမနေပါနဲ့။ သူကခုန်ချမယ်ပြောတာပါ..သတ်သေမဲ့မိန်းမမဟုတ်ပါဘူး။ မြေပြင်ပေါ်မှာ တခုခုခံထားမှာပါ။ ဆေးရုံကား တွေ paramedics တွေလည်းရှိနေဦးမှာ... safety အတွက်အကုန်လုပ်ပြီးမှ လုပ်မှာပါ မယုံရင်ကြည့်နေ။
ပေးထားတဲ့ site ကိုလည်းသွားကြည့်ပြီးပါပြီ။ သူ့ကြည့်ရတာ မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးထက် သူ့အဖေလွတ်မြောက်ရေး သူ့အဖေနာမည်ရရေးကို ပိုပြီးရှေ့တန်းတင်နေပုံရတယ်။ အရေးအသားအရပြောတာပါ။ သူ့အဖေ ကိုမြအေး နိုင်ငံအတွက်ဒီလိုပေးဆပ်နေတာ စာနာပါတယ်။ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။ သို့သော် နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာ နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာ သူ့အဖေကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ကိုဇေရေ တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အရည်အချင်းကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အရေးမပါလုပ်နေတဲ့သူတွေ နာမည်ကြီးချင်သူတွေ အခွင့်အရေးသမားတွေနဲ့ အဲ့ဒီလူတွေကို စုံလုံးကန်း ရူးမိုက်စွာထောက်ခံနေသူ စိတ်ဓါတ်တူသူတွေနဲ့။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ တမလွန်ကမြင်များမြင်နေခဲ့ရင် စိတ်ကုန်မချင့်မရဲတွေဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်း အပြောလေးတွေနဲ့ ဆဲနေမယ်ထင်တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း နအဖ အနေနဲ့ ဦးနှောက်သိပ်စား စရာမလိုပဲ နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာအုပ်ချုပ်နေနိုင်တာပေါ့။
ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားပါ.. နအဖတဖြစ်လဲ ကြံဖွတ်လည်း နောင် အနှစ် ၁၀၀ အသာလေး အုပ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်။
Sit Aung said...
ဒီလို ပေါ်ပြူလာ စတန့်တွေကြောင့် ဘာတွေ အကျိုး အမြတ်ရမှာလဲ။ ၈၈ ထဲက အစာအငတ်ခံ သပိတ်မှောက် တာ ဘယ်လောက်များခဲ့ပြီလဲ။ အဲဒီထဲက ဘယ်နှစ်ယောက် သေသည်အထိ လုပ်ခဲ့သလဲ။ ဆရာတော် ဦဝိစာရလို ကိုကိုးကျွန်းသပိတ်တိုက်ပွဲလို အသက်စွန့်ပြီးလုပ်လို့ လူထု ထဲမှာ ၊ အာဏာပိုင်တွေစိတ်ထဲမှာ ထိခိုက်လှုပ်ရှား သွားအောင်၊ လိုက်လျောလာအောင် ဘယ်သူလုပ်ခဲ့သလဲ။
အစာအငတ်ခံတယ်ပြောပြီး Energy Drink တွေသောက် လူမသိသူမသိ ရောတောပေါတောနဲ့ သပိတ်လှန်
မြန်မာပြည်ထဲပြန်လာပြီး ဦးမဆောင်ပဲနဲ့ နယ်စပ်မှာ အမေရိကန်မှာ ရဲရဲတောက်တိုက်ပြနေ
ဒီလို စတန့်တွေလုပ်နေသမျှ စစ်အစိုးရ ဖြုတ်ချရေး ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ခရီးမရောက်ခဲ့တာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
I strongly support you.
Most of Burmese do not have brain.
Never see the basic problems.
That's why military junta can hold their power. This is useless event.
ဖတ်သွားတယ် နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ရှုတ်ထွေးတယ် အမ တော့ သိပ်နားမလည်ဘူး ဒါပေမဲ့ ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့သူက ကောင်းမယ် ဆိုးတဲ့ သူက ဆိုးမယ်
ကြက်တူရွေး တစ်ကောင် လာပြန်ပြီ။ ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့သူက ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက . .. စာအုပ်တွေ.. မီဒီယာတွေမှာ မကြာခဏ ပြောနေတဲ့စကားပါ။ အဲဒါကို ကြက်တူရွေးလို ပြန်ရွတ်ပြနေတာ။ ဘာဖြစ်လို့ မိမိဦးဏှောက်နဲ့ စဉ်းစားပြီး မပြောတာလဲ? အသက်တွေကြီးပြီး .. ဦးဏှောက်က ဖွံ့ဖြိုးခြင်းမရှိပဲ ရပ်တံ့နေပုံရတယ်။ မီဒီယာတွေထဲက စကားလုံးတွေ. .. စာအုပ်တွေထဲက စကားလုံးတွေကို လာလာပြီးရွတ်မပြနဲ့။ မြန်မာသိက္ခာကျတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ လူဆိုးလူကောင်းရှိတယ်ဆိုရင် နအဖနဲ့.. ဒီမို အညှိးကြီးကြီးနဲ့ရန်ဖြစ်နေတာကို အဲလိုသွားပြောပါ။ အဲဒါကြတော့ မီဒီယာတွေက သင်မပေးလို့မပြောဘူးမဟုတ်လား?
ကြက်တူရွေးရောဂါရနေသည့် ငတုံးများကို အမြင်ကပ်သည့်
ဒီတသက် လွတ်လမ်းတော. တယ်မမြင်
အမျှ အမျှ .....အဲ....သူက ဘယ်မှာလာပြီး အမျှယူလို.ရ
ပါ.မလဲ ။ ဆောရီး ....အလ္လ်ာဟူကဘာာx၃ ....:P
သူငယ်ချင်း နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ရပ်ကို ဝေဖန်ထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေက အမြင်မတူတာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ မဆီမဆိုင် သူများဘာသာကို စော်ကားမော်ကား ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို မထည့်ပေးသင့်ဘူး။ ပို့စ်နဲ့လည်း ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။
မွတ်ဆလင်ကို စော်ကားတော့ နာတယ်ပေါ့ ? အစ်မကိုကြည့်ပြီး ပင်ပန်းလိုက်တာဗျာ။ ကုလားထိတော့လည်း ဆတ်ဆတ်ထိမခံ။ အဖြူထိတော့လည်း ဆတ်ဆတ်ထိမခံ။ ဒီမိုအစိုးရတွေ ထိတော့လည်း ဆတ်ဆတ်ထိမခံ။ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးနေတဲ့သူက GM food စားပြီး ဆီလျှောင်တာကို လူသိအောင်လဲ မရှက်တမ်း ကြွားရဲတာလဲ.. ရယ်ချင်လို့ မဆုံးပါဘူး။ ၀ါးဟားဟား
ကုလား ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားတာကို ဆက်မပြောရဲလို့ … စာတွေအားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့သူက အရှက်မရှိလာပြီး သြ၀ါဒပေးနေတယ်။ အခုထက်ထိ ဆရာတော် ဘလော့မှာ ဆဲနေတဲ့ ကုလားကိစ္စကို မသိဟန်ဆောင်နေတာ ဘာသဘောလဲ? အစ်မက အသက်သာ ကြီးတယ်. .အရှက်က သုံညပဲနော်။ ဟဲဟဲ.. ကြိုပြောထားမယ်.. ရွှေညာမြေက တောသားရဲ့ အကြောင်းကို သိတယ် မဟုတ်လား။ နောင်တမရချင်ရင် နောက်ပြန်ဆုတ်ပါ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်
အဖြူနဲ့ကုလားကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံသော ဒီမိုငတုံးကို ထုနှက်နေသည့်
မဗေဒါ..ဒီပို့စ်မှာ ကလေးမ ကို သူရဲကောင်းအဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ချင်ပုံရတယ်.. ကျနော်တို့ကသာ လူသာအဓိက လုပ်ဆောင်မှုသာ အဓိက ထားနေချိန်မှာ အစ္စလမ်တွေက ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်..အော်ဆီမှာ၂၀၀၉ ခုနှစ်က လုပ်တဲ့ ပဌာန်း ၁၀ ရက်စခန်းမှာ..အညမညပစ္စယော နဲ့ပါတ်သက်ပီး ဆရာတော်က အစ္စလမ်တွေ ဘယ်လိုစည်းရုံးလှုပ်ရှားကြတယ် ဆိုတာဟောတာကို နာရဘူးပါတယ်.. အစ္စလမ်နဲ့ ပါတ်သက်ပီး ကျနော် အထူး စိတ်အပျက်ဆုံးက.. ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို အသေသတ် အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းလို့ အိန္ဒိယ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကွယ်ခဲ့တာပါ ဘဲ.. ဘုန်းဘုန်းတွေ အကုန်လုံး သီဟို ကို ပြေးရတဲ့ အခြေအနေ တရားတော် ပိတကတ် (တတလင်းချိတ်ရှာမရ၍ ခွင့်လွှတ်ပါ) တွေမေ့ကုန်မှာစိုးလို့ ရဟန်းတွေ သောင်ပြင်ပေါ်မှာ နုတ်နဲ့ ရွတ်ဖတ် အာဂုံဆောင်ထားလို့ သာ ကျနော်တို့ အခု မြတ်ဗုဒ္ဓ ရဲ့ တရားတွေ နာခွင့်ရတာပေါ့.. ကျနော်ဆိုချင်တာက မွတ်စ်တွေဟာ အခွင့်သာရင် ကျန်ဘာသာတွေကို သမ လေ့ရှိတယ် ဆိုတာပါဘဲ.. ကျနော်နောက်ထပ် တခုကြောက်နေတာက ရွှေတိဂုံ ဘေးမှာ ရွှေတိဂုံ နဲ့ အပြိုင် ဗလီကြီး တစ်လုံး ပေါ်လာမှာ အကြောက်ဆုံးပါ ဘဲ..ဆော်ဒီက ရှိတ်ကြီးတွေဟာ သူတို့ဘာသာ မူးယစ်နေပေမဲ့ မွတ်စ်သာသနာအတွက်ဆိုရင် အလှုအတန်း ရက်ရောသလို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ အပေါ်လည်း အင်မတန်သြဇာ ငြောင်းတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ.. ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး မဗေဒါက ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများဖြင့် အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ စတိတ်မင့် စာတမ်းထိုးထားလို့သတိပေးလိုက်ရတာပါ..
အပေါ်က shwe ဆိုတာဟာ ကျနော် ဗဟန်း ပါဘဲခင်ဗျား.. google အကောင့်ရှိမှ ပို့စ်လုပ်လို့ရတယ် ဆိုလို့ အပြေးအလွှား လုပ်လိုက်တော့ ရွှေဗဟန်းကနေ shwe ဆိုတာဘဲ သွားပေါ်တယ်.. အလကားရတဲ့ နစ်နိမ်း တောင်မှ ထပ်ပြီး အမျိုးမျိုးမပြောင်းနေရတာ ရှက်လို့ပါ..
there is no god but allah ဆိုပြီးဆူးလေပုံကြီးကို
မဗေဒါ ၊ ၈၈၈၈ လေးလုံးတုန်းကကျနော်နောက်ဆုံးနှစ်
လေးတွဲပြီးသူ၇ဲကောင်းခံထားတာ ၈၈၈၈ သိက္ကာကိုဆယ်
ဘယ်အရူးမှ ပေ ၁၆၀ က သေချာ မခုန်ချသလို ဘယ်သူတောင်းစားမှလည်း ဒီနည်းလမ်းနဲ့ တောင်းမစားဘူး။ အစွန်းရောက်တဲ့ မွတ်စလင် တွေတောင် တခြားနည်းလမ်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နာကျင်အောင် လုပ်ချင်လုပ်မယ် ပေ ၁၆၀ က မခုန်ချဘူး။ အရူးထက် အသိဥဏ် နည်းပြီး သူတောင်းစားထက် ငတ်ပြတ်ပြီး မွတ်စလင် ထက် အစွန်းရောက် တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမား ဒေါ်လာစား အတိုက်အခံတွေပဲ ဒီလို လုပ်တယ်။
ကုလားရေတပ်နဲ့တွေ့တော့ အီးတောင် မပေါက်ရဲပဲ ခွေးပြေး ၀က်ပြေး ပြေးရတာ မင်းတို့ကောင်တွေပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ ခြံကာတာကို ကုလားက မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တာ အားလုံး ကြက်သီးတွေ ထကုန်ပြီး လန့်ဖျားကုန်တယ်။ ကုလားမကြီးကို ပင့်ဖိတ်ပြီး ပဏာလက်ဆောင် ဆက်သပြီး လဒ်ထိုးခဲ့တယ်လေ။ အဲလောက်ကုလားကိုကြောက်တဲ့ ကလိမ်ကကျစ်ဗိုလ်ချုပ်တပည့်ဆိုတော့ . . . မြန်မာလူမျိုးတွေဘက်ကိုပဲ အပြစ်ပြောတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုတော့ ပြောမယ်နော်။ ကုလားကိုကြောက်ရင် ငြိမ်ငြိမ်နေပါ။ မနေရင် ၀တရုတ်ဓါတ်ပုံငါ့မှာ ရှိတယ်။ ပြလိုက်ရမလား? ၀တရုတ်ဆိုတဲ့ အသံကြားတာနဲ့ စစ်သားတွေ ဒူးတုံကုန်တာ သိပါတယ်။ ၀ါးဟားဟား
မိမိဝတ်ထားသည့် စစ်အကျီကို အားမနာပဲ ဗလောင်းဗလဲပြောသူများကို ရွံနေသည့်
ဗိုလ်ချုပ်တွေ နိုင်ငံရေးလုပ်ရာမှာ စစ်သားတွေကို အသုံးပြုခွင့်ရှိလား? တခြားနိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်တွေ နိုင်ငံရေး ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ရင် သူတို့စစ်သားတွေက ဖာသည်မလို သိက္ခာမရှိ ထောက်ခံကြလား။ ဖြေပေးပါ။ ဟဲဟဲ :P အရမ်းသိချင်လို့ပါကွာ။ ခွိခွိ ။ ဗဟုသုတအတွက်ပါ။
မသူတော်ကြီးမှ မတရားအုပ်ချုပ်နေတာကို ပျော်ပျော်လက်ခံမည့်
p.s. ဟဲဟဲ.. အညာသားလေးကြွားချင်ပါတယ်။ ကလိမ်ကကျစ်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ကုလားတွေကို မနိုင်ရင် သခင်ဇော်မျိုးကိုလာမေးပါ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်
ကျုပ်တို့က ပါးစပ်လေးနဲ့ ကုလား အကျင့်ဆိုးတာတွေ ထောက်ပြရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့ . . ကြက်တူရွေးမမနဲ့ ကြက်တူရွေးကိုကိုတွေ။ ဒီမှာ ကုလားအချင်းချင်းလုပ်နေတာလေးကို ကြည့်စမ်းပါဦး။ ကုလားထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိနာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ.. နာလိုရတယ်နော်။ ဟဲဟဲ
အမြင်ကို လေးစားပါတယ်...။ မဗေဒါ က ဝေနှင်းပွင့်သုန် လုပ်မည့် လုပ်ရပ်အပေါ် အားပေးပါတယ်...`မိုး `ဆိုသူ ဆွေးနွေးသလိုပဲ တိုင်းပြည်တခုမှာ လူမှု ဒုက္ခတွေထက် နိုင်ငံရေး ကိစ္စ (ပြဿနာ)များ ရှိနေမှုကြောင့် ( ဥပမာ ဆိုရသော်... ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ရက်စက်စွာ အကျဉ်းကျခံနေရသူများအတွက် ) အခုလို လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးဟာ ဆွဲဆောင်မှု တခုပါပဲ..။ အမြင့်ကို ကြောက်တဲ့ ကလေး တယောက်က အခုလို လုပ်ပြမယ်ဆိုတာကလည်း ချီးကျူး စရာပါ.. ဆိုလိုတာက ကိုယ် ကြောက်ပါရဲ့ နဲ့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး အများကိစ္စအတွက် အလုပ် တခုကို ရဲဝံ့စွာ လုပ်ပြချင်တာကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုပါတယ်..။ သူဒီလိုလုပ်လို့ နာမည်ကြီးတော့လည်း သူသတ္တိရှိလို့ ကြီးတာမို့ မဗေဒါ က ပိုပြီး ဂုဏ်ယူပါသေးတယ်..။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို အာဇာနည်ဆိုတဲ့ စကား တလုံးမှ မပြောပဲ မောင်ဇေက အဲဒီလို ပြောတဲ့အတွက် နားမလည်ပါ... သတ္တိ ရှိသူကို သတ္တိရှိတယ်လို့ ပြောတာ ဘာမှ မမှားဘူး ထင်ပါတယ်..။ နောက် ဆုံးတခုက ကိုယ်မလုပ်ရဲတာကို လုပ်ပြရဲတာဟာ အားကျစရာမဟုတ်ပေမဲ့ ချီးကျူး အားပေးသင့်တယ်လို့လက်ခံပါတယ်..။
မင်းကို တခုပဲ ပြောလိုက်မယ်.. မင်းသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစစ်ဆိုရင် သူများဘာသာကို ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှ စော်ကားစရာ အကြောင်းမရှိသလို ...` ငါ `..` ငါကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာရယ်` လို့ အစွဲကြီး အယူသည်းပြီး ဘာသာခြားကို စော်ကားနေတယ်ဆိုကတည်းက မင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ မပြောသင့်တာ အမှန်ပဲ..။
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အစွန်းရောက် တွေရဲ့ အပြုအမှု အပြောအဆိုအများကြီးကို ကြားဖူးတယ်... ကြည့်လဲကြည့်ဖူးတယ်... တွေ့လည်း တွေ့ဖူးတယ်..။ ဒါပေမယ့် သန်းပေါင်းထောင်ချီတဲ့ မွတ်စလင် များထဲမှာ အေးဆေးစွာ နေလိုသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးဆိုတာကို လည်း အပြည့်အဝ လက်ခံထားသူ ဖြစ်ပါတယ်..။ မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ မွတ်စလင်အုပ်စု တခုခု ဒါမှမဟုတ်ူတယောက် ယောက် က မြတ်စွာ ဘုရားပုံကိုသော်လည်းကောင်း... ကျွန် မတို့ ရှိခိုးနေတဲ့ ရွေတံဂုံကိုသော်လည်းကောင်း.... စော်ကား ဖျက်ဆီးခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ သေးသိမ်တဲ့ စိတ်ထား ..လုပ်ရပ်... အဖြစ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်... ။ အဲဒီအတွက် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တိုင်းကို စော်ကားလို့ မရသလို အပြစ်တင် လို့ မရဘူးလို့ ယူဆပါတယ်..။ တဆက်တည်း ပြောချင်သည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကိုယ်တိုင်ကရော သူများ ဘာသာကို တကယ်လေးစား တန်ဖိုးထားတက် ဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်..။ လူတစု တယောက်ကြောင့် ဘာသာခြားများကို အပြစ်မြင်ခြင်းဟာ အင်မတန်မှ မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆ အဖြစ် ရူမြင်ပါကြောင်း.. နားလည်သလောက် ဆွေးနွေးပါတယ်။
ကြက်တူရွေး ရောဂါရှင်တစ်ယောက်ကို တွေ့ရပြန်ပြီ။ အမှန်အတိုင်းပဲ အစ်မတို့ကို. . . ဒီမိုငတုံးလို့ပြောရင် ဒေါသအရမ်းထွက်ကြတယ်။ မြှောက်ပင့်ပြောရင် ပြုံးစိစိနဲ့ သိပ်ပြီးကျေနပ်ကြတယ်။ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေကလဲ စာအုပ်တွေထဲဟာကို အလွတ်ကျက်မှတ်ပြီးမှ ပြောကြတယ်။ လူသတ်.. မုဒိမ်းကျင့် .. ကြာကူလီလုပ်ဖို့ သင်ပေးတဲ့ဝါဒကို မကောင်းပြောရင် …ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ဘူးပြောတဲ့ အစ်မရဲ့ ဥာဏ်ရည်ကို လေးစားမိပါတယ်။ အကြီးကြီးကို လေးစားပါတယ်။ ကြက်တူရွေးရောဂါဆိုတာ ကုရာ နထ္ထိဆေးမရှိတဲ့။
☀ သန်းပေါင်းများစွာတွေထဲမှာ မွတ်ဆလင် အနည်းစုကပဲ အကြမ်းဖက်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားဘာသာတွေမှာ အဲလိုကြမ်းဖက်တဲ့ လူနည်းစုဆိုတာ လုံးဝမရှိဘူး။
☀ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လူနည်းစုကပဲ မြတ်ဗုဒ္ဓကို အတုယူပြီး ကြိုးစားတဲ့လူက လက်တစုတ်ပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနည်းစုကိုကြည့်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကောင်းတဲ့ ဘာသာလို့ ပြောရင် လက်ခံတယ်မဟုတ်လား? မွတ်ဆလင်မှာလဲ လူနည်းစုကပဲ တမန်တော် မိုဟာမက်လို လူသတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ ကြာကူလီစတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်တာပါ။ လူနည်းစုကြည့်ပြီး ဘာကြောင့်မွတ်ဆလင်ကို ဆိုးတယ်လို့ အပြောမခံနိုင်တာလဲ? (အစွန်းရောက်ဆိုတာ မိုဟာမက်လို ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့သူကို ပြောတာပါ။)
☀ တခြားဘာသာကို စော်ကားတဲ့သူကို သေးသိမ်တယ်လို့ မြင်ရင် တမန်တော် မိုဟာမက်ကိုလဲ သေးသိမ်းတယ်လို့ မြင်ရမယ်။ သူဟာ သူများတွေကိုးကွယ်တဲ့ နတ်ရုပ်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူပါ။ တမန်တော်မိုဟာမက်ကို အပြစ်တင်မလား? ဘယ်တင်ရဲမလဲ.. ကုလားကို ကြောက်လိုက်တာ တုံပြီးနေတာကိုး။ မြန်မာအချင်းချင်းပဲ အိမ်ကျယ်လုပ်ရဲတယ်။
☀ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သူများဘာသာကို တန်ဖိုးမထားတာ ဘာဖြစ်လဲ? အဲဒါနဲ့ မွတ်ဆလင်နဲ့ တန်းတူထားပြီးပြောရသလား? ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်မှ ဗုံးမခွဲပါဘူး။ ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကမှ တခြားဘာသာဝင်တွေကို သတ်ဖြတ်ဖို့ အဖွဲ့အစည်းထောင်တာ မရှိပါဘူး။ ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာက တခြားဘာသာရဲ့မြေကိုခိုးပြီး ဘုရားမတည်ခဲ့ဘူး။ ကုလားထိတာနဲ့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို မစော်ကားနဲ့။
စာအုပ်တွေထဲမှာ ရေးသမျှယုံတဲ့သူများကို အကြီးကြီးသနားတဲ့
ကုလားမ ဆိုတော့ ကုလားပြည်ကိုပို့ရမယ်...
ရုပ်ကလေးကတော့ မဆိုးရှာပါဘူး sexy ကျသားပဲ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်တော့ နှမြောစရာကြီး ဟီး...
လင်ကောင်မပေါ်ဘဲ အာရပိတွေ ချပြီးမွေးသော ကလေး ဇော်မျိုး ဒီမိုတွေကိုဆဲလိုက် အစိုးရ ကိုဆဲလိုက်နဲ့ လူတောမတိုးတဲ့ အရူးကို မသိပဲ အစ်မတို့တွေက နေရာပေးတာ
မြန်မာဝါဒီသခင်ကြီး Mis. ★အာရပိကလေးဇော်မျိုး★
မင်း ဘာကြောင့် ၀ရမ်းပြေးလာရလဲ canada မှာသူခိုးလို နေတယ်။ နေရာပေးရင် ခွေးပါဝတယ်။ မြန်မာဝါဒီသခင်ကြီး Mis. ★အာရပိကလေးဇော်မျိုး★
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို တစက်မှ မပါဘူး။ လင်ကောင်မပေါ်ဘဲ အာရပိတွေ ချပြီးမွေးသော ကလေး ဇော်မျိုး ***မြန်မာနိုင်ငံပြန်ချင်ရင်ပြော
ဒီမိုတွေကိုဆဲလိုက် အစိုးရ ကိုဆဲလိုက်နဲ့ လူတောမတိုးတဲ့ အရူးကို မသိပဲ အစ်မတို့တွေက နေရာပေးတာ
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၃ နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် မွန်သံဃာတော်တပါးကို အင်းစိန်အထူးတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း
မတူရင်မတုနဲ့ လေထွာ အဖြစ်မရှိ အပြောနဲ့ လေထွာ " မဝေနှင်းပွင့်သုန်"လို သတ္တိ မင်းလေးမှာရှိလို့လား
မြန်မာဝါဒီသခင်မကြီး Mis. ★အာရပိကလေးမဇော်မျိုး★
အခုမှပဲ မဗေဒါနဲ့ အဆက်အသွယ်ရတော့တယ်နော်။
မဗေဒါရေ ဒီသတင်းကို ဘီဘီစီကလည်း နားထောင်လိုက်ရတယ်။
ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကို အားပေတယ်၊ မဗေဒါရေ။
ကျွန်မပို့စ်မှာ လာရေးသွားတဲ့ အတိုင်း၊ကျွန်မထက်ချောတဲ့ (ကျွန်မလည်းချောတယ် လို့ပြောချင်တာ) ၊ကျွန်မထက်ငယ်တဲ့ ၊ ကျွန်မထက်ကိုယ်ရေစစ်ပြီး စတိုင်ကျတဲ့ ညီမလေးဆိုတော့ အဟင်း ၊ သူ့ဓါတ်ပုံဘယ်တင်ချင်တော့မလဲ နော်။
မအားတာသိပါတယ်။ အားရင်တော့ လာလည်နော်။
☀ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သူများဘာသာကို တန်ဖိုးမထားတာ ဘာဖြစ်လဲ? သတ္တိုရှိရင် အပြင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေဖန်ဟု မျိုးကန်း အဒူမိဇော်မျို: ကပြောလေ၏ထိုသို့ပြောခြင်းသည် ဗုဒ္ဒဘာသာကို လူရမ်းကားဝါဒသာဖြစ်သည်ဟု ၀န်ခံခြင်းဖြစ်၏
ကဲဗျို့.. ခေတ်မှီသူတိုင်း ကုလားကို ဘုံးတော်ဖွဲ့ရသည်တဲ့။ ကျုပ်ကတော့ ခေတ်မမှီချင်ပါဘူး။ မဗေဒါဘလော့ကို ခေတ်မှီစေချင်ပါတယ်။ သစ္စာဖေါက်လွမ်းဆွေ ဘလော့မှ ကုလားဘုန်းတော်ဘွဲ့ထားတဲ့ စားသာတွေကို ပြန့်ဖြန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မမဗေဒါကြီး အဲဒါလေးတွေဖတ်ရရင် ပျော်ရွှင်မှာပါ။
ပြင်သစ်မှာ မွတ်ဆလင်တွေ အဓိကရုဏ်းလုပ်နေပါပြီ http://myanmartruthers.blogspot.com
လုပ်တဲ့ သူတွေကတော့ လုပ်နေတာ ပါဘဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်တော့လဲ အားပေးရမှာပေါ့။
ကျုပ်ကြောင့် စိတ်ရှုပ်သွားလား? ကဲကဲ.. နောက်ထပ် ဒီမှာမရေးတော့ဘူးနော်။ အစ်မကို မမုံန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်.. အမျိုးသားရေး ကိစ္စဆိုတော့ .. ဟဲဟဲ .. တောသားက နည်းနည်းကြမ်းတယ်ဗျ။ မြို့သားတွေလို အိညှက် အိညှက်မလုပ်တတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလဲ နီးနေပြီ TV မှာ မိန့်ခွန်းဘယ်တော့ပြောမှာလဲ? ဆင်ဆာ လွတ်အောင် ဦးသန်းရွှေကို ဘုန်းတော်ဖွဲ့ပေးနော်။ အကူညအညီလိုရင်ပြောပါ။ ကျေးစေတမန်က စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးတယ်ဗျ။ သူတို့နဲ့သွားရင် ဆင်ဆာ ကိစ္စမပူရလောက်ဘူး။ ကဲကဲ.. ငါးခြောက်ဖုတ်လေးကို .. ဆီလေးနဲ့စမ်းထားတယ်။ စားလိုက်ပါဦး။ ( ၀မှာမကြောက်ပါနဲ့ ဒီဆီက အရမ်းသန့်ပါတယ် )
p.s. ကုလားမ ခုံချတဲ့နေကျရင် ထပ်ပြီးတော့ တွေ့မယ်နော်။ ဟိဟိ
မင်္ဂလာပါမဗေဒါ.. အစ အဆုံး ဖတ်သွားပါတယ် (တချို့ အရေမရ အဖတ်မရ ကော်မန့်တွေကို တကြောင်းခြား နှစ်ကြောင်းခြား ကျော်ဖတ်ရတာကလွဲလို့)။
မဝေနှင်းရဲ့ ပြောပုံဆိုပုံတွေ နားထောင်ပြီးတော့ သူမကို အင်မတန်ချီးကျူးမိတယ်၊ နောက်မှ သူမရဲ့ ဘာသာကို သိလိုက်ရတာ၊ ကျနော့်အနေနဲ့ သူမဟာ ဘာသာခြားပါလားဆိုပြီး အမြင်တိမ်းစောင်းသွားခြင်း မရှိပေမယ့်၊ အစ္စလမ်ဘာသာကို အရမ်းမုန်းတီးတဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေ (ကျမ်းစာမီးရှို့မယ့် ခရစ်ယာန် pastor လိုမျိုး) များသထက် များလာရင် ဒီအချက်လေးက သူမရဲ့ နိုင်ငံရေးခရီးလမ်းအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခု ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပဲဗျ၊ အဲသလိုသာဆိုရင်တော့ (တကယ်ပဲ နိုင်ငံအတွက် ပေးဆပ်ချင်စိတ်ရှိနေတဲ့) လူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ကြယ်တစ်ပွင့်ဟာ ပန်းတိုင်မရောက်ပဲ လမ်းခုလပ်မှာတင် ကြွေသွားဖို့ရှိတယ် ထင်ပါတယ်၊ ကျနော် မဝေနှင်းကို လေးစားချီးကျူးတယ်၊ တချိန်တည်းမှာ ဘာလို့များ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်” အမျိုးကောင်းသမီး တစ်ယောက်ယောက်လောက် သူ့လိုပဲ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မရောက်လာတာလဲ လို့ အားမလို အားမရ ဖြစ်မိပါတယ်။ အပေါ်မရောက်ပဲ လမ်းတဝက်မှာတင် ကြွေကြွေသွားတဲ့ ကြယ်ပေါင်းများစွာ ကျနော်တို့ မြင်ဖူးပြီးပါပြီ၊ ထပ်မမြင်လိုတော့ပါဘူး။
တချိန်တည်းမှာ ဘာလို့များ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်” အမျိုးကောင်းသမီး တစ်ယောက်ယောက်လောက် သူ့လိုပဲ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မရောက်လာတာလဲ လို့ အားမလို အားမရ ဖြစ်မိပါတယ်။
အပေါ်စာကြောင်းက မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဆိုလိုပါတယ်၊ မိန်းခလေးဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ကမ္ဘာက aware ဖြစ်စေပြီး နောက်ကနေ action တွေ လိုက်လာစေနိုင်လောက်အောင် အရည်အချင်း အစွမ်းအစရှိတဲ့ လူငယ်တွေ ပေါ်လာရင်သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ။ မဝေနှင်းကတော့ ပထမအဆင့်မှာပဲ ရှိသေးပေမယ့် ပုတ်ခတ်သံတွေ ကြားနေရပါပြီ၊ သူမ အစွမ်းအစကြောင့် မဟုတ်ပါပဲ သူမ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားကြောင့် ဖြစ်ရတာ နှမြောစရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
မြအေးကို ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဲ.၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ ကံ-ကံ ၏ အကျိုးကို ယုံတဲ့၊ ရန်သူကို တောင် မေတ္တာ မပျက်တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ ကို လက်တွေ့ကျင့်ကြံ တဲ့၊ လောဘ မောဟ ကိလေသာ မဖက် ဘာသာရေး ကို ရှေ့တန်းတင် တဲ့ အမျိုးကောင်း သမီးလေး အတွက် အချင်းချင်း ပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့ သတ်ဖြတ် လည်သူစားစတမ်း အာဏာလုပွဲ၊ အပြန်အလှန် အပုတ်ချပွဲ ကျင်းပ နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ကို ဘယ်လို စိတ်ဓာတ်မျိုး နဲ့ ပါဝင်နိုင်ပါ့ မလဲ။
မြန်မာပြည် က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းကျ နေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ လို စာ ကို ဒီမိုကရေစီ Blog တစ်ခု မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် နှစ် လောက်က ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဲဒီ ထဲမှာ "သံဗုဒ္ဓေ ဂါထာ ကို မယုံကြည် ပေမဲ့ ထောင်ထဲ မှာ အားနေ သမို့ အလကားနေ အလကား ဆိုပြီး ရွတ်နေခဲ့ပါတယ်" ဆိုတဲ့ စာကြောင်းတွေ့ပြီး ကထဲ က "မတရား သဖြင့် အုပ်ချုပ်နေသော သူများ" ဘာကြောင့်မို့ မြဲနေသလဲ ဆိုတာ နားလည် ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘာသာရေး ဆိုတာ ကို နိုင်ငံရေးအတွက် လုပ်မစား သင့် ပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အကြောင်း-အကျိုး ဆက်နွယ်ရာ ကို သိပြီး မေတ္တာ ဆိုတာကို ရှုမြင်တတ်ရင် ကိုယ့်ကို ပြစ်မဲ့ မျှား တောင် လွဲပါတယ်။ ရန်သူတောင် ဦးညွတ်ပါတယ်။
အခု မှာတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘဲ အားလုံး ဟာ အချင်းချင်း မုန်းတီး မှု များ၊ အညိုးအတေးများ၊ အာဃာတများ ရှေ့တန်း တင်နေသ၍ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မက ကမ္ဘာမှာလဲ လူသတ်ပွဲများ စစ်ပွဲ များ ကြား မှာ အပြစ်မဲ့သူ များ ထိခိုက် နစ်နာ လို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်တော့ ဘူးဆိုသာ သတိပြုသင့် ကြပါတယ်။
သိသိ ကြီးနဲ့ အာဏာ၊ ပါဝါ၊ နာမည်၊ ငွေကြေး အတွက် မို့လုပ်တာ ဆိုရင်လဲ မေတ္တာတရား ဆိုတာ ပထမ နေရာမှာ ရှိ ရမဲ့ ဘာသာရေး ကို ဆွဲမထည့်သင့် ကြပါဘူး။
ကျနော် တမင် အရွဲ့တိုက်ရေးတာပါ။ ကျနော့်အမြင်သက်သက်ပဲ ပြောရရင် နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေး လုံးဝကို မဆိုင်သင့်ပါဘူး။ (လက်တွေ့မှာတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ လုံးထွေးနေတယ်ဗျ)
ဟိုလူက ဟဝှာဖြစ်လို့၊ ဒီလူက ဒီဟာဖြစ်လို့ ဘေးထိုင်ဘုပြောနေသူတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများ ကိုယ့်အပေါ်ရောက်သွားတာ လက်မခံချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပေါ်ရောက်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်၊ အပေါ်ကလူကို လိုက်ဆွဲချနေရုံနဲ့ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါကို ပြောချင်တာပါ။
စင်္ကာပူရဲ့ ပထမဆုံးသမ္မတ Yusof bin Ishak က အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိသမ္မတ Sellapan Ramanathan က ဟင်ဒူဘာသာဝင်ပါ။
စာမျက်နှာပိုင်ရှင်တော့ အားနာပါရဲ့ဗျာ ... မနေနိုင်လို့ သတင်းနဲ့မဆိုင်ပဲ လျှောက်ရေးမိပြီ။ ဝေနှင်းဆိုတဲ့ ညီမလေး စကားပြောတာ ပြတ်သားတာ၊ သေချာပြင်ဆင်ပြီး ချက်ကျကျပြောနိုင်တာတော့ လက်ခံပါသဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ ပြည်သူနဲ့တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှထိရောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေ မရှိသေးခင်တော့ အချီးမွှန်းမစောပဲ ဆောင့်ကြည့်စေချင်တယ်။
ကုလားတွေကို စကားလုံးလေးနဲ့ ဝေဖန်တာကို ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာတွေ . . . မြန်မာလူမျိုး နအဖကို အတင်းအဖျင်းပြောမှ စားဝင်အိပ်ပျော်တဲ့ ဒီမိုသမားတွေ . . .စစ်သားရဲ့ သိက္ခာကို မထောက်ပဲ မြန်မာလူမျိုး ဒီမိုသမားတွေကို အတင်းပဲ ထိုင်ပြောနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကို မေးချင်ပါတယ်။ ဦးလွမ်းဆွေ ဘလော့မှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ရေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်ပြီးပြီလား?
မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို/နအဖ တံဆိပ်တွေကြည့်ပြီး အမုန်းအဃာတတွေကြီးနေတာ မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ မြန်မာအချင်းချင်း အတင်း . . အဖျင်းတွေပြောနေတာကိုပဲ နိုင်ငံရေးလို့ သဘောထားနေတာလဲ မှားယွင်းတဲ့ စိဓါတ်ပါပဲ။ သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ အဖြူ ၊ ကုလားတွေအတွက် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်ပြီး. . မြန်မာလူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်ရင် မသိဟန်ဆောင်နေတာကလဲ မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ထား မဟုတ်ပါဘူး။ မျိုးချစ်စိတ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်း ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားပြီး မိမိနဲ့မဆိုင်သလို နေရာတကာ ဥပက္ခာပြုပြီး ဘေးကနေ လက်ပိုက်မကြည့်ပါနဲ့တော့။ ကရင်၊ ဗမာ ၊ ရှမ်း ၊ ပအို့ ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေမကြည့်ပဲ မြန်မာအချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ … အဲဒီအလုပ်သမားတွေကို ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲ.. ဘယ်လို ငွေကြးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားအဖြေရှာပေးကြပါဦး။ သံရုံးနဲ့ .. နအဖ ထိပ်ပိုင်းကို ပြောကြားနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိသူများကလည်း .. အစိုးရအချင်းချင်း ၀င်ရောက်ပြောကြားအောင် နားချပေးကြပါဦး။ မိမိက ဘာမှ မစွမ်းဘူးဆိုလဲ လက်ပိုက်ကြည့်မနေပဲ . . . အနည်းဆုံးတော့ နှုတ်နဲ့ ဆောင်မပေးကြပါ။ ရေနစ်တဲ့သူတွေကတော့ မြက်တစ်ပင်တောင် အားကိုးလိုကြပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာကော်မန့်ရေးခွင့်ပေးတဲ့ ဒီမိုဘလော့ဆိုတာ လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။ ဘလော့ဖတ်တဲ့သူတွေကလဲ နအဖဘလောက်ပဲ လွတ်လပ်မှုပေးတယ်ဆိုတာ သိနေပြီ။ ဒီမိုတွေက အဲဒါကို ပြင်ဖို့မကြိုးစား :) ရယ်ဖို့တော့ ကောင်းသား
နအဖ ၊ ဒီမိုများနှင့် လက်ပိုက်မျိုးချစ်များ
ကဲကဲ.. စိတ်တွေလျှော့ကျပါဦးကွာ။ မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို/နအဖ တံဆိပ်ကြည့်ပြီး ရန်ဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ၂၂နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ လောကကြီးကပြောင်းလဲနေတာတောင် သတိမထားမိဘူးဖြစ်နေပြီနော်။ ( မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေကလဲ မြန်မာအချင်းချင်း ပြဿနာဖြစ်နေတာကို ပြေလည်အောင် ညှိမပေးဘူး။ လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေရတာ လက်ညောင်းနေလောက်ပြီ။ ) မကြာမီမှာ ဒီမိုသမားတွေအနေနဲ့ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောဖို့မလိုတော့ဘူး။ နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အတင်းအဖျင်းပြောဖို့ မလိုတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ခေါင်းဆောင် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အပြည့်အစုံကို ဒီမိုတို့အတွက် ခေါင်းဆောင်သစ် (သို့မဟုတ်) မြအေးသမီး ဆောင်းပါးမှာ အထောက်အထားနဲ့ တင်ပြထားတာကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်
လက်ပိုက်ကြည့်သောသူတို့၏ မျိုးချစ်စိတ်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့
ဝေနှင်းပွင့်သုန်ကို Personally မဝေဖန်လိုပါ ။ သို့သော် ဗမာနိုင်ငံရေးသည် မွတ်ဆလင် ကုလားများနှင့် မည်သို့မှ မပတ်သက်ပါ။ သင်တို့ကို လိုလဲမလိုအပ်ပါ။ အရှင်းဆုံးပြောရလျင်.ကုလားများ ဗမာပြည်အရေးတွင် နေရာယူလာခြင်းကို လက်မခံနိုင်ပါ. အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ပါသည်။
ကျွန်မ အမြင်အရပြောရရင်တော့ waste of time, waste of money ပါပဲ.... သူတကယ် လုပ်ပေးချင်ရင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်ပြန်လာပြီ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေးဆိုပြီး အင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှာ အော်ရဲ ရင် ကျွန်မထိုင်ပြီး ရှိခိုးလိုက်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မ မလုပ်ရဲလို့ပဲ.... ခုလို သိုင်းကြိုးတွေ သိုင်းထားပြီး ခုန်ချတာတော့ အမြင့်မကြောက်တဲ့ သူတိုင်း ခုန်ရဲတာပါပဲ :) သူရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အပြောကောင်းတာကိုတော့ ကျွန်မ ချီးကျူးပါတယ်အားလည်း အားကျပါတယ်.... မြန်မာပြည်သာ ဒီမိုကရေစီရမယ်ဆိုရင် world trade center ပေါ်ကနေ ဘာသိုင်းကြိုးမှ မပါနဲ့ ခုန်ချပေးလိုက်မယ် (အဲလိုလူမျိုးတွေလည်း အများကြီးလို့ ထင်ပါတယ်) နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် ရှင် မြန်မာပြည်ကလူတွေက "အ" လို့ ငြိမ်ခံနေတာ တစ်ယောက်မှ မပါဘူးဆိုတာတော့ အားလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်.... :)
မဗေဒါ blog ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ဖတ်မိတာပါ။ ဒီ topic ထဲမှာညင်းခုန်နေကြတာသဘောကျလို့ Comment ပေးမိတာပါ။ အစ်မအကြောင်းမသိပေမဲ့ အစ်မ ရေးထားတဲ့ Reply comment များကိုဖတ်မိတာနဲ့ လေးစားမိပါတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးအခေါ် နဲ့အဆင့်အတန်းကိုသူရေးတဲ့စာများကဖော်ပြနေပါတယ်။ ပညာတတ်လူငယ်များအစ်မလိုတွေးခေါ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မည်သူမဆို မိမိမွေးဖွားရာ ဇာတိကို မြတ်နိုးတွယ်တာကြပါသည်၊၊ ကုလားဖြစ်ဖြစ် ဗမာဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖြစ်ပါ၊၊ မြင့်မြတ်သည့် မဟာမြန်မာဝါဒီဆိုသောကြောင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျာမန်လူမျိုးကြီးဝါဒကို သွား၍ သတိရမိပါသည်၊၊ ဤကဲ့သို့သော ဝါဒ ပြန့်ပွားလာပါက မြန်မာပြည်အရေး မတွေးဝံ့စရာပင်၊၊ မိမိ၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကြောင့် အမိနိူင်ငံအတွက် အကျိုးမပြုနိူင်ပါက ဝမ်းနည်းစရာပင်ဖြစ်သည်၊၊ နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေရသော မဟာဝါဒသခင်ကြီး၏ မှတ်ချက်များမှာ မိမိပြောချင်ရာ စွတ်ပြောနေသော မျက်ကန်း တစ်ယောက်နှင့်တူနေသည်ကိုတော့ မပြောလိုတော့ပါ၊၊ ဒီမိုဝါဒကောင်း၏ ဆိုး၏ မဝေဖန်လိုပါ၊၊ သို့သော် ဤမြေတွင်မွေး ဤမြေတွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည့် သူတစ်ယောက်မှာ မိမိ၏ အသံကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုနိူင်ခွင့်ရှိရပါမည်၊၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော မြန်မာလူမျိုးများသည် မဟာဝါဒကို လက်ကိုင်မထားကြပါ၊၊ အနာဂတ် မြန်မာ ဟစ်တလာများ ပေါ်ပေါက်လာနိူင်ဖွယ်ရှိသည်ကို မိတ်ဆွေများ သတိပြုဖွယ်ဖြစ်သည်၊၊
ဘာတဲ. သတ္တိရှင် ဆိုပါလား
သတ္တိရှိရင် ဘာလို. အင်္ဂလန်မှာ သွားခုန်တာလဲ
ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်ရှေ.မှာ ခုန်ပါလား ။
သောက်ပို ခုန်တဲ.သူကော တင်ပေးတဲ.သူကော
သောက်ရေးမပါတာတွေ လုပ်နေတယ် ။
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ အင်္ဂလိပ်ပေးမှ ရမယ်ထင်နေပုံပဲ။
နေတော. နိုင်ငံခြားမှာ ခံယူထားတာက နိုင်ငံခြားသား
ပြောတော. မြန်မာပြည်အကြောင်း ။ သင်တို. ဒေါ်ဆု အီး ကို နဲနဲ လောက် တောင်းစား စေချင်သည် ။ ခံယူချက်ခြင်း နံသာဆီနှင်. အီးလောက် ကွာနေတာကို ရှက်သင်.ပြီ ။
အခုကိစ္စမှာ ဘာသာရေး တရားတစ်ချို့ ကိုစော်ကားတဲ့.ကွန်းမန့် တွေ ရှိပါတယ်...
ူကြာနီကန်ဆရာတော် ဟောသ လိုပေါ့..
” သူတစ်ပါးအမျိုးဘာသာသာသနာ ကိုဖျက်ဆီးရင်၊ ကို့ အမျိုးဘာသာသာသနာ သာ ပျက်စီး လိမ့် မည် “ တဲ့
သူတစ်ပါးအမျိုးဘာသာသာသနာ ကို ဖျက်ဆီးသော် ၊ မိမိ အမျိုးဘာသာသာသနာ သာ ပျက်စီလတ္တံ့ ...
တိုက်ပေါ်က ခုန်ကျသေမှန်းမသိ တိုက်ပေါ်က ကြိုးနဲ့ခုန်ချပြီး ရန်ပုံငွေရှာမှန်းတောင်မသိပဲနဲ့များ တက်နေရးနေသေးတယ် ... စာလေးဘာလေးသေချာဖတ်ပါဦးဗျာ ...
ဒီနေရာမှာ လာဖတ်ရတာ ရီတော့ရီနေရတယ်ဗျ ... ဝေနှင်းပွင့်သုန်က တိုက်ပေါ်ကခုန်ချသေပြတာလား ... သက်ကယ်ကြိုးတပ် ခုန်ချပြပြီး အဖွဲ့စည်းအတွက် ရန်ပုံငွေရှာတာလားတောင် သေချာမသိပဲ သတင်းလေးတောင် မဖတ် ဆရာလုပ် တက်ရေးနေတဲ့ သူတွေရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး ရီမိပါတယ်ဗျာ ...